[SOMALI] Waa maxay Jir-Difaaca wadareedka dabiiciga ah ee jirku, Sidee buuse ula xiriirraa COVID-19 | News & Blog | KFAI - Minneapolis + St. Paul
Wendy Carlos - Sonata In D Major, L. 164 / K. 491 (Scarlatti)	Barb Abney , Mason Butler
Sandalinas - The Wrong Side Of Me	Barb Abney , Mason Butler
[SOMALI] Waa maxay Jir-Difaaca wadareedka dabiiciga ah ee jirku, Sidee buuse ula xiriirraa COVID-19
Jir-difaaca wadareed ee dabiiciga ah ayaa waxaa sidoo kale loogu yeeraa difaaca saamaynta guud, jir-difaaca saamaynta jaaliyadda, jir-difaaca saamaynta dadweynaha, ama kan saamaynta busladda.
Marka loo eego dhinaca Waaxda Caafimaadka ee Minnesota, midaani waa marka inta badan ee dadweynaha ama kooxi jirkoodu si dabiici ah isaga caabiyo cudur.
Difaac dabiici ah macnaheeda waa in uusan xanuunku ku dhici karin dadka, waayo waxa ay qaateen talaal, ama waxaa horay ugu dhacay xanuunka, iyo in uusan ku dhacaynin mar kale, ugu yaraan ilaa in mudo ah.
Markii uusan xanuunku ku dhici karin dad badan, waxa ay caawisaa ka hortagga ku dhicista dad kale oo dadweynaha ka tirsan kuwaas oo aan lahayn jir-difaac dabiici ah iyo in ay qaadi karaan cudurka. Jiritaanka jir-difaac wadareedka dabiiciga ah ayaa joojin karta ama yarayn karta faafitaanka cudurka.
Ma aanu naqaan aqoon buuxda oo ku saabsan COVID-19 si loo xaqiijiyo suurto-galka jir-difaaca wadareed ee dabiiciga ah. Kani waa xanuun cusub, hadaba ma ay jirin wakhti ku filan oo si buuxda weli loogu daraaseeyey difaaciisa.
Ma aanu naqaan inta ay qofka ku qaadanayso in uusan qaadin cudurka markale kadib makii uu horay ugu soo dhacay COVID-19 (Intee ayay iska sii difaaci karaan).
Ma aanu naqaan in hadii aad cudurka horay u qaaday uu marka labaad noqon doono mid ka roon ama ka xun kii hore.
Ma garanayno in qof horay u soo jiradey, oo hadana la kulmay isla COVID-19 mar labaad uu u sii gudbin karo caabuqa (Virus-ka) dadka kale.
Anagu ma awoodno keenista jir-difaaca wadareed in uu ku yimaado si dabiici ah, taasi waxa ay sababtay in kumanaan reer Minnesota ah ay aad u jiradaan ama ay dhimanayaan. Talaaku waa jidka lagu gaari karo jir-difaac dabiici ah oo wadareed ayada oo uusan dadku jirran iyo/ ama aysan dhimanaynin. Talaalku wuxuu u ogolaadaa in jirka qofku horumariyo difaaca kahortagga cudurka ayada oo sida caadiga ah la xanuunsan.
Fariintaan waxaa idin soo gaarsiiyey Waaxda Caafimaadka ee Minnesota.